Ciqaabaha taraafikada iyo qodobada: ganaaxyada ugu badan | Ragga Stylish
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah cunaqabateyntu, taas oo ah falcelinta maamulka ganaaxyada taraafikada ee la soo saaray.
Marka ay tahay dembigu waa mid culus, wuxuu u horseedi karaa dambi iyo ciqaab ciqaabeed. Hadda, waa maxay ganaaxyada ugu badan?
1 Ganaaxyada ugu badan ee dambiyada taraafikada ee Spain
2 Waxyaabaha ku xeeran tikidhada taraafikada
3 Kaqeybgalka bulshada
Ganaaxyada ugu badan ee dambiyada taraafikada ee Spain
In kasta oo ay jiraan ganaaxyo badan oo suurtagal ah oo ku saabsan wadista baabuurta, kuwani waa kuwa ugu badan:
Xawaareynta: badanaa wuxuu qaataa ganaax u dhexeeya 100 ilaa 500 euro iyo luminta labo ilaa lix dhibcood.
Khamri xad dhaaf ah: ganaax ilaa 500 euro ah, luminta afar dhibcood iyo saddex bilood bilaa shati. Qiyaasaha iyo heerarka qaarkood, waxay noqon kartaa dambi.
Adeegsiga mobilka shaagagga: ganaax lacageed oo gaaraya 200 oo euro iyo luminta seddex dhibcood.
Ka gaabinta aqoonsiga qofka galay dambi.
Ixtiraam la'aan calaamadaha JOOJI, Soo saar, ama nalalka cas. Ciqaabta dhaqaale ee kiisaskaas waxay gaari kartaa 200 euro.
Baarkinka aan habooneyn. Sidoo kale kiisaska baarkinka meelaha aan la ogalayn, ganaaxu wuxuu noqon karaa 200 euro.
Waxyaabaha ku xeeran tikidhada taraafikada
Inta dembiyada taraafikada laga hadlayo, dhammaan gaadiidku waa ku jiraan. Marka la soo koobo, waxay ku saabsan tahay iska ilaali shilalka isla markaana nidaamiya wada noolaanshaha bulshada ee aaggan.
Ficil ahaan, no xadgudubyada oo dhan waxay leeyihiin cunaqabatayn dhaqaale. Cunaqabateyntu waxay noqon kartaa noocyo kala duwan, dabeecadda dembiga ama xadgudubku wuxuu saameeyaa nooca cunaqabateynta.
Falanqaynta xaddiga, ciqaabaha ugu daran waxaa ka mid ah kuwa halista gelinaya nolosha dadka kale iyo dembiilaha laftiisa. Dabeecadaha sida ku kaxaynta xawaare sare ama khamri cabsan ama daroogo ayaa ka mid ah kuwa ugu daran.
Dembiyada taraafikada ayaa sababa shilal badan sanad kasta, taasoo ka dhalata jarista, dhaawacyada darnaanta kala duwan iyo dhimashada. Ganaaxyadu ma aha oo keliya arrimo dhaqaale, laakiin waxay muujinayaan inay jirto dhibaato aan dhaafin oo keliya xayiraadda, asal ahaan waa dhibaato waxbarasho.
Ilaha sawirka: Autopista.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Ganaaxyada ugu badan